गर्भपतनबारे कानुनी मान्यता र विस्तार « Pariwartan Khabar
२६ मंसिर २०७६, काठमाडौं
सन्तानको चाहाना पुगेर रहेको गर्भ, बच्चा जन्माउनको लागि अनुपयुक्त उमेर (कम वा बढी उमेर) मा बसेको गर्भ, गर्भवती अस्वस्थ हुँदा बसेको गर्भ वा बलत्कार, हाड नाता करणीबाट रहेमा त्यस्तो गर्भलाई तुहाउने वा पतन गर्ने कार्यलाई गर्भपतन भनिन्छ।
नेपालमा गर्भपतन सेवाले २००२ मा कानूूनी मान्यता पाएको थियो। यस मान्यता पश्चात केहि महिलाहरुले यसको प्रयोग गरेको पाइयो भने केहिलाई यसबारे जानकारी नै नभएको पाइयो। नेपालमा अझै पनि ४२ प्रतिशत महिलालाई मात्र गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको कुरा बारे जानकारी छ भने ५८ प्रतिशत छैनन्।
सहि सुचनाको कमि, लाञ्छना, गोपनियता, सुचिकृत स्वास्थ्य चौकी, डाक्टर र औषधी, भौगोलीक जटिलता आदिको समस्याले गर्दा अझै पनि महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन्। गर्भपतन सेवा सरकारले ७७ वटै जिल्लामा निःशुल्क गरेता पनि सुचनाको कमिले अझै पनि महिलाको ज्यानै जोखिममा राखेर असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन्।
गर्भपतन सेवालाई थप गुणस्तरिय, पहुचयोग्इ, लाञ्छना रहित, युवा मैत्री बनाउन रुओन नेपाल लगाएत १५ ओटा संस्थाको संजाल राइट हिअर राइट नाउ मार्फत स्थानिय, प्रदेशिक हुदै राष्ट्रिय तह सम्म सरकारसँग पहल र वकालत गर्दै आइरहेको छ।
२०७५ को केही मापदण्डहरु निमार्ण गरि निम्न अबस्थामा गर्भपतन गराउन पाउने व्यबस्था गरेको छः
(क) गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्ता सम्मको गर्भ।
(ख) गर्भपतनन गराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारिरीक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा बिकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भइ त्यस्ति महिलाको मञ्जुी बमोजिम अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ।
(ग) जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रन गएको गर्भ वर्भवती महिलाको मञ्जुरीको अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ।
(घ) रोग प्रतिरोधकक्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच/आई/भी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्यनिको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीको अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ।
(ङ) भ्रूणमा कमिकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुने वा जन्मेर पनि बाच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशााणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्थाा रहेको भन्ने उपचाारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ।
हाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निशुल्क बनाएको छ। ७७ वटै जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालहरुले सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिदै आएका छन्। करिब १२ सयको स्वास्थ संस्थाले यस्तो सेवा दिदै आएका छन्।
गर्भपतनबारे रहेका केही भ्रम र अन्धविश्वासका कारण अझै पनि नेपालमा अशुरक्षित गर्भपतन गराउने संख्या धेरै छ। जसले गर्दा धेरै जसो महिलाहरुको स्वास्थमागम्भीर असर परेको छ। साथै समाजको पनि हेय्को पात्र बन्न विवस् छन्। धेरै जसो महिलाहरुको ज्यान नै जाने गरेको छ भने कतिको तत्कालै र दिर्घकाल सम्म स्वास्थमा गम्भिर असर परेको छ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया २०६० ले १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा पतन गर्न कानुनले मान्यता दिएको थियो। उता जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणी भएको अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ फाल्न पाइने व्यवस्था छ। लिङ्ग पहिचान गरेर, गर्भवती महिलाको सहमतिबिना र बार्ह हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन कानुनले बन्देज लगाएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विशेषज्ञ र अनुमति प्राप्त चिकित्सकले मात्र २८ हप्तासम्मको गर्भ फाल्न पाउँछन्।
१ औषधिको प्रयोगद्वाराः ९ हप्तासम्मको गर्भलाई औषधिको प्रयोगबाट सुरक्षित पतन गर्न सकिन्छ।
२, उपकरणको प्रयोगद्वारा: १२ हप्तासम्मको गर्भलाई साधारण उपकरणको प्रयोगद्वारा सुरक्षित रूपमा पतन गर्न सकिन्छ।
सुरक्षित गर्भपतनका लागि प्रभावकारी विधिहरु
सुरक्षित गर्भपतनका लागि औषधिको प्रयोग र सर्जिकल उपकरणको प्रयोग दुवै विधि प्रभावकारी छन्। महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार विधि छनोट गर्न सक्छन्।
उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतनः उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन अर्थात् पाठेघरमा रहेको भ्रूणको साधारण प्रक्रियाको माध्यमबाट पाठेघर सफा गरी भ्रूणलाई बाहिर निकाली गर्भपतन गर्ने विधि हो। सर्जिकल गर्भपतन १२ हप्तासम्मको गर्भलाई साधारण उपकरणको प्रयोगद्वारा सुरक्षित रूपमा गर्न सकिन्छ।
उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको स्वास्थ्यसंस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेृवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारबाट अनुमति पाएका अर्थात् सूचीकृत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा मात्र गराइन्छ।
उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतनमा पीडा हुन्छ?
गर्भपतनको यो विधि ५ देखि ७ मिनेटको हुन्छ, जसमा महिलाले हल्का दुखाइ महसुस गर्छन्।
के उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतनले महिलाको प्रजनन क्षमतामा कुनै असर गर्छ?
यसले महिलाको प्रजनन क्षमतामा कुनै असर गर्दैन। यस विधिको प्रयोगपश्चात् २ देखि ३ हप्तामै प्रायः महिलामा डिम्ब निष्कासन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। गर्भपतन गराएको केही हप्तामै गर्भ रहन सक्छ।
औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतनः यस विधिमा तालिम प्राप्त दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा भरपर्दो र प्रमाणित औषधिद्वारा सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराइन्छ । यस विधिद्वारा ९ हप्ताभित्रको गर्भलाई मात्र सुरक्षित रूपमा पतन गर्न सकिन्छ।
के औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सुरक्षित हुन्छ?
यो महिलाका लागि सुरक्षित छ। औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन यदि ९ हप्ताभित्रको गर्भमा प्रयोग गरेमा ९८ प्रतिशत प्रभावकारी छ।
के औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतनले महिलाको प्रजनन क्षमतामा कुनै असर गर्छ?
यसले महिलाको प्रजनन क्षमतामा कुनै पनि असर गर्दैन। यस विधिको प्रयोगपश्चात् २ देखि ३ हप्तामै प्रायः महिलामा डिम्ब निष्काशन सुरु हुन्छ। उनीहरू गर्भपतन गराएको केही सातामै गर्भवती हुन सक्छन्।
परिवार नियोजनका अस्थायी साधन
कण्डम भनेको यौनसम्पर्कका वेला पुरुषले आफ्नो लिङ्गमा लगाउने पातलो रवरको खोल हो। स्खलन भएको पुरुषको वीर्य कण्डम भित्र रहन्छ जसका कारण योनीभित्र शुक्रकीटको प्रवेश हुन पाउँदैन र गर्भ रहँदैन। कण्डम सुरक्षित हुन्छन् र तिनका कुनैपनि प्रतिकूल प्रभावहरु हुँदैनन्।
गर्भ निरोधक चक्कीहरुमा हर्मोनहरु हुन्छन् जुन महिलाहरुको शरिरमा पाइने प्राकृतिक हर्मोनहरु जस्तै हुन्छन्। महिलाहरुको डिम्वासयबाट डिम्व निश्कासन हुन नदिई तिनले गर्भ्निरोधकको काम गर्दछन्।
२ मुख्य प्रकारका गर्भ्निरोधक चक्कीहरु छन्ः एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टिन नामक दुई हर्मोनहरु भएका मिश्रित चक्कीहरु र प्रोजेस्टिन मात्र भएका साना चक्कीहरु। केही प्रचलित ब्यापारिक नामहरु को मुखबाट लिइने गर्भ निरोधक औषधीहरुमा दिइएका छन् । गर्भ निरोधक चक्कीहरुले एच/आई/भी वा अन्य यौन प्रसारित संक्रमणहरुका बिरुद्ध रक्षा गर्दैनन्। तिनबाट जोगाउन कण्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ।
केहि महिलाहरुले खाने चक्कीको प्रयोग गर्न रुचाउँदछन् किनकी यसले तिनको महिनावारी चक्रलाई झनै नियमित बनाउँदछ। जसले गर्दा कहिले तिनको महिनावारी शुरु हुन्छ भनी ठ्याक्कै थाहा पाउँछन्। खानेचक्कीको प्रयोगले महिनावारीबाट निस्कने रगतमा समेत कमी आउँछ र ऐंठन एवं दुखाई कम हुन्छ।
नरप्लान्ट र कपर टी
नरप्लान्ट र कपर टी लामो समयसम्म गर्भ रोक्ने अस्थायी साधन हो। नरप्लान्ट महिलाहरुको पाखुराका राख्ने गरिन्छ। यो पाखुराको छाला मुनि राखिने भएकोले सबैले सजिलै लगाउन सक्दैनन् । त्यस्तै कपर टी महिलाहरुको पाठेघरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्धारा राखिन्छ।
यस्ले १२ वर्ष सम्म गर्भ हुन नदिने हुन्छ, तर आवश्यता अनुसार यसलाई झिक्न सकिन्छ। तर यसले भित्रि यौनाङ्गको संक्रमण अर्थात पिआइडी गराउन सक्छ। यसमा हर्मोन प्रयोग नगरिएको हुनाले यसले महिनावारीको गडबडी गराउदैन।
तीन महिने सुई
जन्मान्तरका लागि महिलाहरुले तीन महिने सुई लिन सक्छन्। डिपो, सगिंनी आदि बजारमा सजिलै पाउने तीन महिने सुई हो। यसको आफ्नै फाईदा तथा बेफाईदा छ । तर तीन महिने सुई लिएका महिलाले सुई लिन छाडेको चारदेखी आठ महिनासम्म पनि गर्भ नरहन सक्छ।
१५ माघ २०७६, काठमाडौं सुकुटी र आलो मासु बोकेर जापानको विमानस्थलमा ओर्लिएका दुई जना नेपालीलाई
१५ माघ २०७६, काठमाडौं धनुषामा सवारी दुर्घटना हुँदा श्रीमान–श्रीमतीको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको गनेशमान चारनाथ
१५ महिना पहिले भारतीयसँग विवाह गरेकी नर्स आफ्नै डेराभित्र भेटिइन यस्तो अवस्थामा
१५ माघ २०७६, काडमाडौं अरुको जीवत बचाउँदै हिड्ने एक नर्सको ज्यान गएको छ। धनगढीमा स्टाफ